Bear On Mountaintop @ Deep Creek Lake - I-Airbnb
McHenry, Maryland, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Tina & Robert
Ngaphezulu kwe-Wisp Mountain. Umphakathi we-Greenbriar. Vakashela i-ASSI Whitewater Center - imizuzu engu- kude - noma uhlole i-Lodestone Golf Course eseduze. I-Premium Vacation Home inikeza isethingi enhle kakhulu yasezintabeni enawo wonke amasevisi nekhwalithi ephakeme yokujabulisa umhambeli weholide oqaphela kakhulu!
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukujabulela ukunethezeka kwendawo yomlilo yangaphandle nobhavu wamanzi ashisayo ngaphansi kwe-porch emboziwe noma ikhwalithi eyakhiwe ye-Nemith yangaphakathi. ngeke udumazeke ngalokho okunikezwa yi-Mountaintop Retreat! Ngena endlini yeholidi eyakhiwe ngokhuni ngaphansi kwevaranda emboziwe futhi masinyane uhlatshwe umxhwele ngophahla oluwuvulande kanye nokuphela kokunethezeka okutholakala kuyo yonke indawo.
Izinga eliyinhloko linikeza i-Master Suite ene-TV futhi ikamelo ngalinye elisendaweni yaphansi liphinde linikeze umbhede weNdlovukazi, i-TV nendawo yokugeza yangasese. I-inthanethi Esezingeni Eliphezulu ihlanganisa amasevisi endlu. Woza ujabulele le ndlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni! Uzoba phakathi nendawo yokudlala igalofu, ukuhamba ngezinyawo, ukushushuluza eqhweni, nemizuzu engu- ukusuka e-Dawn Creek Lake.
Isethingi emangalisayo, eyenziwe ngamapulangwe itholakala emizuzwini engu- kuyo yonke imisebenzi ye-Resort e-Dawn Creek Lake.
Ibungazwe ngu-Tina & Robert
Sinezindawo zokuqasha eziseduze ze-Offlake ezisebenza njengomphathi wethu wendawo ukuze siqinisekise ukuthi yonke inkinga isingathwa ngokushesha futhi ngobungoti. Ngokuvamile sitholakala ngemiyalezo ye-AirBnB kodwa ihhovisi eliqashisayo lisebenza izinsuku ezingu-7 ngeviki.
Sinezindawo zokuqasha eziseduze ze-Offlake ezisebenza njengomphathi wethu wendawo ukuze siqinisekise ukuthi yonke inkinga isingathwa ngokushesha futhi ngobungoti. Ngokuvamile sitho…
Hlola ezinye izinketho ezise- McHenry namaphethelo